Ciidammada Dowladda oo itaalkooda milatari ku muujiyay weerar ka dhacay Afmadow
Jab weyn ayaa soo gaaray ururka laga itaal dheeraaday ee al-Shabaab kaddib markii dagaallamayaal ka tirsan kooxdaas argagixisada ah ay weerar kusoo qaadeen saldhig ay Ciidammada Xoogga Dalka iyo kuwa Jubbaland ku leeyihiin degmada Afmadow.
Saraakiil ka tirsan Ciidamada Jubbaland ayaa waxa ay sheegeen inay iska difaaceen weerarka kaga yimid dhinaca ururka al-Shabaab, iyo in dhowr xubnood oo ka tirsanaa kooxdaas ay dagaalkaas ku laayeen.
Dagaalka ayaa yimid kadib markii al-Shabaab ay weerarku qaadeen saldhig Ciidamada Dowladda iyo kuwa Jubbaland ku leeyihiin degmadaas Afmadow,waxaana goobjoogayayaal ay sheegeen in dagaal culus uu halkaasi ka dhacay.
Wararkii u dambeeyey ee haatan naga soo gaaraya degmada afmadow ayaa waxaa ay sheegayaan in Ciidamada Dowladda iyo kuwa Jubbaland ay wadaan dhaq-dhaqaaqyo ciidan, iyaga oo isku fidiyey deegaanno kale oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose.
Ururka dilaaga ah ee al-Shabaab waxaa laga xoreeyay goobo badan oo hadda ka hor ay arriminayeen oo ay ku dhibaateynayeen shacabka Soomaaliyeed, iyadoo jab kaloo weyn uu ka soo gaaray horjoogeyaasha ururka oo ka soo goostaan ururka isuna soo dhiibaan dowladda Soomaaliyeed ee horaanba u fidisay cafis guud si ay ugu darmaan bulshada qumman ee Soomaaliyeed.
Xorriyo 2 Views : 258
Xorriyo 1 Views : 10503